Nezvedu | Xuzhou Hoyer Glass Technology Co, Ltd.
Hoyer Girazi ndiyo chidimbu chekushandira pamwe kwaMwari, kubva pane zvakataurwa nemutengi wedu Michael. Hoyer girazi yakanyanya kuita mukutsvakurudza nekusimudzira, dhizaini, yekugadzira, yekutengesa uye yekutengesa yemarudzi ese emhando yepamusoro girazi kurongedza. Semhizha uye yekumhanyisa pamberi mumuchina weChina glassware, Izvozvi, tiri kushanda gumi nematanhatu ezvinyorwa zvegirazi nezviuru zvemhando, zvakaita semabhodhoro okuzora, mabhodhoro ekunwa, mitsuko yegirazi, mabhodhoro euchi, mabhodhoro ejam, midziyo yekudya, mabhodhoro echinwiwa. , mabhodhoro emishonga, musanganiswa wezai, ndiro dzinopwanya yezai, mahwendefa emichero, makapu, tafura uye zvimwe zvigadzirwa zvine hukama.
Girazi reHoyer rine mitsara yemasangano makumi matatu uye mwaka uno kuburitsa zvigadzirwa zvinosvika mamirioni mazana matatu (zana nemakumi mashanu ematani). Tine mabasa matanhatu akadzika ekugadziridza anokwanisa kupa chando, kudhinda logo, kupuruzira kupurinda, kuprinda screen, kunyora, kupukuta, kucheka kuti uone "one- stop shop" services kwauri.
Zvigadzirwa zvedu zvakabvumidzwa neSGS, CE, GE, ISO nezvimwe uye zvakanakidzwa mukurumbira mumusika wepasi rose. Zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kune anopfuura makumi matatu nyika dzakasiyana nematunhu, seUSA, Australia, Hong Kong, Africa, Europe, Southeast Asia, Middle East uye zvichingodaro.
Kugutsikana kwevatengi, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye basa riri nyore nguva dzose ndeaishandira yekambani. Tinogamuchira neushamwari shamwari kubva kumba nekune dzimwe nyika kushanyira fekitori yedu. Neboka redu revashandi, vane mutoro, vane simba uye vane ruzivo, tinotenda kuti sevhisi yedu inokwanisa kubatsira bhizinesi rako kuti riwedzere kukura pamwe chete nesu.